China ND200 ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Jianma
Nd200 isothermal ချောင်း PCR detector
Isothermal amplification နည်းပညာသည် nucleic acid (gene) amplification နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်။
စသည်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနည်းပညာ၏မော်လီကျူးဇီဝဗေဒအနေဖြင့်နျူကလိအက်ဆစ်ကိုလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်ရှိရန်တိကျသောအင်ဇိုင်းများနှင့်တိကျသော primer များမှတဆင့်အမြဲတမ်းအပူချိန်တွင်အမြဲတမ်းအပူချိန်တွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောတိကျမှု၊ နှင့်တန်ဖိုးနည်း။
၎င်းသည်အခြေခံသိပ္ပံ၊ အစားအစာဘေးကင်းလုံခြုံမှု (ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောအဏုဇီဝသက်ရှိများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ အသားထုတ်ကုန်များဖျက်သိမ်းခြင်း၊ Transgene ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုစသည်ဖြင့်)၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေး (ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ မျိုးရိုးဗီဇထုတ်ဖော်မှု၊ , တိရိစ္ဆာန်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှု (ကြီးမားသောတိရိစ္ဆာန်များ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ, ရေနေတိရိစ္ဆာန်များ, etc), သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အခြားနယ်ပယ်။
Nd200 isothermal fluorescent PCR detector သည်နိုင်ငံတကာ ဦး ဆောင်သော isothermal nucleic acid amplification နည်းပညာနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအပေါ်အခြေခံသည်။
၎င်းသည် isothermal amplification ထောက်လှမ်းမှုအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တိကျ။ မြန်ဆန်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်အဏုမြူအက်ဆစ်၏မြန်ဆန်သောရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုလွယ်ကူစွာပြီးမြောက်စေပြီးသင့်အားအချိန်နှင့်အမျှနျူကလီးယားအက်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှုသည်± 0.1 ℃ဖြစ်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် optical အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်
မြန်ဆန်။ တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏အချိန်မှန်ပြသမှု
အိတ်ဆောင်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်, အမြန်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လယ်ပြင်အဘို့သင့်လျော်သော
သေးငယ်သော၊ ပေါ့ပါး။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ စမ်းသပ်မှု၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လွယ်ကူသည်။
၁. ၇ လက်မအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးကြည်လင်ပြတ်သားသည့်မျက်နှာပြင် PDA၊ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်လည်ပတ်မှု၊ ရိုးရှင်းလွယ်ကူခြင်း။
၂။ ၁၆x ၀.၂ မီလီမီတာတုံ့ပြန်မှု module သည်ရှစ်တန်းပြွန်များနှင့်တစ်ခုတည်းပြွန်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
3. Marlow အရည်အသွေးမြင့် Peltier ရေခဲသေတ္တာချစ်ပ်, ဂျာမန် high-end PT1000 အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာနှင့်လျှပ်စစ်ခုခံမှုအပူလျော်ကြေးအစွန်းအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု mode နဲ့ပေါင်းစပ်။
4. ရိုးရှင်းပြီးထိုးထွင်းသိမြင် software ကိုလမ်းညွှန်, isothermal ချောင်း PCR စမ်းသပ်မှုဖွင့်လှစ်ရန်လွယ်ကူသည်။
optical system ကို
အခြေခံစွမ်းဆောင်ရည် အရွယ်အစား 320 * 280 * 152mm
အလေးချိန် ၂.၉ ကီလိုဂရမ်
ဆူညံသံအဆင့် 20 分贝
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် operating4~ 35 ℃
ဆက်စပ် parameters တွေကို နမူနာစွမ်းရည် 16 အပေါက် * 0.2ml
သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ 0.2ml တစ်ခုတည်းပြွန်, 8 * 0.2ml အတန်းပြွန်
စမ်းသပ်ကိရိယာအစုံ ပွင့်လင်း isothermal ချောင်းထောက်လှမ်း
ထိန်းချုပ်မှုတိကျမှန်ကန်မှု ± 0.1 ℃
အပူချိန်တူညီမှု ± 0,15 ℃
အပူချိန်တိကျမှန်ကန်မှု ± 0.2 ℃
အလင်းအရင်းအမြစ် မြင့်မားသောတောက်ပသော LED
စိတ်လှုပ်ရှားလှိုင်းအလျား 470nm ± 10nm
ထောက်လှမ်းလှိုင်းအလျား 520nm ± 10nm
ထိန်းချုပ်ရေး ထိန်းချုပ်မှု mode ကို အရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
ရလဒ်အနက်၏နည်းလမ်းများ amplification curve software အရယဉ်နှင့်ယန်ကိုအလိုအလျောက်အနက်
ဆော့ဝဲ function ကို အဆိုပါတုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်; တုံ့ပြန်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်; အကယ်၍ တုန့်ပြန်မှုအချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဆိုပါကတုံ့ပြန်မှုကိုပြုပြင်ချိန် (အတိုကောက်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့နိုင်သည်) ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မတူညီသောအပူချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ အပူချိန်တစ်ခုချင်းစီသည် 0.1 ° C; တုံ့ပြန်မှုအစီအစဉ်ကို template တစ်ခုအနေဖြင့်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတွင်းအမည်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်; စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကြားကာလကို ၁၈ မှ ၆၀ အထိသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပုံမှန်ကြားကာလသည် ၆၀ ဖြစ်သည်။ ကြားကာလအချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အကွာအဝေးမှာ ၁၈-၆၀၊ ပုံမှန်ကြားကာလသည် ၆၀ ဖြစ်သည်။ ကြားကာလအချိန်ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊ အကွာအဝေး ၁၈-၆၀၊ ပုံမှန်ကြားကာလသည် ၆၀ ဖြစ်သည်။ ယဉ်ယန်ဆုံးဖြတ်ချက်၏တံခါးခုံတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ တံခါးခုံလိုင်းကိုတက်ဆွဲချနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု: SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Detection Total Solution
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ တရုတ် Rapid စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ, Rapid Nucleic Acid ထုတ်ယူခြင်း Kit, ထုတ်ယူခြင်း - အခမဲ့ Kit, Canine Parvovirus (Cp),